FuseFX Provides VFX for John Ridley’s “American Crime” and “Let It Fall” – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
ဒါဘီရဲ့ရိုင်ယန် Bala မိတ်ဆက် "TheFoodPornHub.com"
နယူး Sonic တံဆိပ်တပ်နှင့်အတူစတီဖင်အာနိုး Music ကို refresh တရုတ်ဂလိုဘယ်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက် (CGTN)
Home » သတင်း » FuseFX "ဒါဟာ Fall ကြစို့" ယောဟနျ Ridley ရဲ့ "အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှု" ဟု VFX ပေးနဲ့
FuseFX "ဒါဟာ Fall ကြစို့" ယောဟနျ Ridley ရဲ့ "အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှု" ဟု VFX ပေးနဲ့
Los Angeles- အ FuseFX Los Angeles မြို့ အဆိုပါပေါင်းချုပ်တွေလည်းစီးရီး - သင်္ဘောသားမကြာသေးမီကအော်စကာဆုရှင်စာရေးဆရာ / ထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာ John Ridley အားဖြင့်နှစ်ခုစီမံကိန်းများအတွက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုများပေး အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှု နှင့်အင်္ဂါရပ်-အရှည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Fall ဒါဟာကြစို့ဧပြီလ 28 ထုတ်လွှင့်ရာ။
အဆိုပါစတူဒီယို၏တတိယရာသီအတွက်တစ်ဦးတည်းသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုပံ့ပိုးပေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် အမေရိကန် မြောက်မြားစွာ 3D အစုံ extension များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုရင်တော့ Matte ပန်းချီကားများထည့်သွင်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု, ။ "ဒီစီးရီးမြောက်ကာရိုလိုင်းနားထဲမှာလုံးဝရာအရပ်ကိုကြာ, ဒါပေမယ့်ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့သည် Los Angeles မြို့"ဂျေဆန် Piccioni, VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးစလုံး Ridley စီမံကိန်းများအပေါ်မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဟုအဆိုပါ VFX အလုပ်၏ခြင်္သေ့ရဲ့ရှယ်ယာအစားထိုးတိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်နှင့် / သို့မဟုတ်အဆောက်အဦကိုပိုပြီးအနီးကပ်ရှုခင်းတူကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်, အာရှရပင်, လယ်ကွင်း, ငါတို့ဇာတ်လမ်းတည်နေရာသေးငယ်တဲ့မြို့များ။ "
ပြပွဲ၏ဝေမျှတစ်စခန်းအိုးအိမ်ရွှေ့ပြောင်းလယ်ယာလုပ်သားများအတွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ထဲမှာဒစ္စနေး Ranch မှာ rundown အမြည်းတစ်ဝင်္ထွက် built Los Angeles မြို့ ထို့နောက်နောက်တွဲယာဉ်ပန်းခြံ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင်နှင့်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားမှသင့်လျော်သောတစ်ရှုခင်းနှင့်အတူကဝန်းရံဖို့ CG နှင့်မှုန်သောပန်းချီကားများနှင့်အတူသူတို့အားစခန်းများတိုးချဲ့, "Piccioni အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်။
ရန် FuseFX ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများ Fall ဒါဟာကြစို့၏ယဉ်ကျေးမှုမှာတစ်ဦး In-depth ကိုကြည့် Los Angeles မြို့ တဦးတည်းမဟုတ်ဘဲအသွင်သဏ္ဌာန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထက်အရေးကြီးသောအခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းဖို့ - ထို 1992 အဓိကရုဏ်းအထိဦးဆောင်နှစ်များတွင်တစ်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြီးကြ၏။ FuseFX အနုပညာရှင်တွေကာတွန်းမြေပုံများ, လက်ရေးမှတ်စုများနဲ့ခေါင်းစဉ်ရာပေါင်းများစွာနှင့် critical information ကိုပေးနှင့်ဇာတ်ကြောင်းကြွယ်ဝစေဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်တလျှောက်လုံးအသုံးပြုကြသည်အခြားဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။
"သူတို့သဘာဝအားဖြင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Exposition တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပမာဏကိုထည့်သွင်းရန်လေ့" Piccioni ရှင်းပြသည်။ "ယောဟနျ Ridley ကြည့်ရှုသူတို့တစ်တွေဖတ်စာအုပ်ဖတ်နေပါတယ်နဲ့တူခံစားခြင်းမရှိဘဲကစုပ်ယူနိုင်အောင်, ရုပ်ရှင်သတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ပြမယ့်လမ်းကိုရှာဖွေနေခဲ့သည်။ "
Piccioni ရဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကနေဒါရိုက်တာ Ridley, အယ်ဒီတာဖြစ်သူ Colin Rich (အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှု) နှင့်အနုပညာဒါရိုက်တာ Manija Emran ရုပ်ရှင်၏ texture နှင့်ဘာသာစကားလိုက်ဖက်သောဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါဟာအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်နေဆဲဇာတ်လမ်းပြောပြရန်ဒါအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ပျော်စရာပဲ" ဟု Piccioni ကပြောပါတယ်။
Piccioni ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်မှပြန်ပြောပြကြည့်ရှုလာအောင်နှိုးဆွကြောင်းစီမံကိန်းများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခှငျ့ထူးခဲ့ကြောင်း shared ။ "ယောဟနျရိုးရိုးသားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုနှင့်ဤအခြေအနေများအများအပြားနှစ်ဖက်နှင့်အတူစာနာဖို့ဖြစ်ပေါ်စေမယ့်လမ်းအတွက်ပုံပြင်များတင်ဆက်ထားပါတယ်များအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိပါတယ်" ဟုသူကမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဒီမီးခိုးရောင်ဧရိယာနှင့်ဤလူရဲ့ဘဝတွေကိုလှမျးမိုးပြံ့နှံ့ကြောင်းခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်များ, ငါ, ငါတို့ရှိသမျှနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်သော themes များထင်နေကြတယ်။ "
"နှစ်ဦးစလုံးပြပွဲကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာစဉ်းစားရန်တိုက်တွန်းပြီးအမျိုးသားရေးစကေးပေါ်ဤအကြောင်း themes များမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူ," Piccioni ကထပ်ပြောသည်။ "ဒါဟာယောဟနျနှငျ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးပါစေသောသူတို့ကိုစိန်ခေါ်မှုများပါပဲ။ "
FuseFX အတွက်အဆောက်အဦးများအနေဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြား, အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နှင့်ကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Full-service ကိုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယိုဖြစ်ပါသည် Los Angeles မြို့နယူးယောက်နှင့်ဗန်ကူးဗား။ ဒါဝိဒ်သည် Altenau အားဖြင့် 2006 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီ 300 မြင့်မားပါရမီနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအနုပညာရှင်များ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ခံမှုပုဂ္ဂိုလ်များထက်ပိုတဲ့သင်္ဘောသားလွှမ်းခြုံ။ အရည်အသွေးမြင့်ပေါ်တွင်အချိန်ရလဒ်များကိုပို့ဆောင်စဉ်က၎င်း၏သန့်စင်ပြီး, ထုံးစံဒေတာဘေ့စများနှင့်ပိုက်လိုင်းအသုံးပြုခြင်း, ကုမ္ပဏီမြောက်မြားစွာမြင့်မားရိုက်ချက်-count ကဘဏ်ဍာလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် fusefx.com/
ဒါဘီရဲ့ရိုင်ယန် Bala မိတ်ဆက် "TheFoodPornHub.com" - ဇူလိုင်လ 19, 2018
Rising Sun ကရုပ်ပုံများကိုချဲ့ထွင် Studios နှင့်န်ထမ်းများ - ဇူလိုင်လ 17, 2018
SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မများနှင့် VES, Los Angeles မြို့, ပူးတွဲဇူလိုင်လအစည်းအဝေးတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး Explore မှ - ဇူလိုင်လ 13, 2018
ရုပ်မြင်သံကြား တီဗီနည်းပညာ Visual Effects	2017-06-05
ယခင်: The Next-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Sony က CineAlta!
နောက်တစ်ခု: Cineo Lighting နယူးဖြန့်ဖြူးအဖြစ် VariZoom အမေရိကန်နိုင်ငံကြေညာ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "" ဒါဟာ Fall စို့အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှု "FuseFX ယောဟနျသ Ridley ရဲ့များအတွက် VFX ပေး" "နှင့်" ။ http://www.broadcastbeat.com/fusefx-provides-vfx-for-john-ridleys-american-crime-and-let-it-fall/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။